FOTODRAFITRASA: MIJERY AKAIKY IREO TANORA NY MINISTERA
Nanatanteraka fitsidihana ifotony ny foto-drafitr’asa napetraky ny Ministera tamin’ny lalam-pirenena fahafito ny Ministry ny Paositra sy ny fifandraisan-davitra ary ny fampiroboroboana ny haitao ara-kajy mirindra ny 02 martsa 2020. (Biraon’ny Paositra Malagasy tao Behenjy, Ambohimandroso, Antsirabe Bibliothèque Numérique Lisea Ambatolampy sy André RESAMPA Antsirabe, ary ny Vohikala ao amin’ny Lisea Primevère Antsirabe).
Tsy mialonjafy, tsy mifidy saranga ary mahavantana kokoa ny vahoaka ny mampiasa ny tolotra ao amin’ny paositra malagasy araka ny tafa nifanaovan’ireo mpiasa sy ny mpanjifa tamin’Atoa Ministra RAMAHERIJAONA Andriamanohisoa. Nihaino ireo hetahetan’ny mpiasan’ny paositra ihany koa Atoa Ministra ary nilaza ny tenany fa vonona hanampy ny paositra malagasy hatrany.
Mahakasika ny Vohikala sy ireo « bibliothèque numèrique » izay foto-drafitrasan’ny ministera dia nisy ny fifanakalozan-kevitra teo amin’Andriamatoa Ministra sy ireo tompon’andraikitra tsirairay, ho fanatsarana sy fampihodinana azy ireny mba ho lasa tetik’asa maharitra.
Raha tsiahivina, ny ankizy sy ny tanora no tena mpisitraka mivantana ireny fotodrafitrasa ireny. Laharam-pahamehan’ny Ministera ankehitriny rahateo ny fanomezana toerana ny tanora eo amin’ny fampandrosoana ny tontolon’ny nomerika eto Madagasikara.